Manazava ny fomba fiarovana ny ordinateranao amin'ny Botnets ny Semalt Expert
Nilaza i Nik Chaykovskiy, Semalt mpanara-maso ny Customer Success, fa lasa zavatra tsotra ho an'ny mpampiasa aterineto rehetra ny mailaky ny spam. Ny ankamaroan'ireo mpampiasa aterineto dia mahazo mailaka imailaka mailaka isan'andro izay mahazatra ny ordinatera spam. Noho ireo filalaovana spam amin'izao andro maoderina izao, ny mpampiasa dia afaka manafoana ny ankamaroan'ny mailaky ny spam. Mety manontany tena momba ny loharano sy ny antony manosika ireny mailaka mailaka ireny. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo mailaka ireo dia avy amin'ny botnet. Botnets dia iray amin'ireo loza manahirana indrindra amin'ny fiarovana mpitety tranonkala. Tamin'ny vao haingana, nitatitra ny FBI fa tany Etazonia, mpampiasa 18 no nampihoron-koditra isan-tsokajiny.
Inona no atao hoe Botnet?
Ny botnet dia ahitana "solosaina zombies", izay mifehy ny mpanafika, matetika tsy misy ny fampitandreman'ny tompony. Ny mpanafika dia mamorona bot ary mandefa azy amin'ireo solosaina manokana. Avy eto, afaka mandefa baiko sy manara-maso ireo mari-pamantarana C & C avy amin'ny serivera izy ireo. Ny solosaina iray izay tratran'ity malware ity dia tsy fehezin 'ny tompony intsony. Ilay mpanafika dia afaka manatanteraka baiko tahaka ny fanafihana DDoS amin'ny tranonkala iray manokana. Ny bot dia mametraka ny singa ampiasain'ny botnet. Avy amin'ny fandikana ity app ity, ilay mpanafika dia mampiasa satroka mainty
C & C ho an'ny bots: Ity fomba ity dia mandefa ny torolàlana amin'ny tambazotra bots ary mandray azy mivantana any amin'ny server. Modely avo lenta ny fifandraisana.
Miara-mitahiry Ny bot dia afaka mifandray mivantana amin'ny bot hafa. Manome fomba fitaratry ny fandefasana torolàlana sy fandraisana feedback. Amin'io fomba io, ny bot-master dia afaka mifehy ny botnet amin'ny ankapobeny.
Hybrid: Ity tetika ity dia singa iray amin'ireo fomba roa voalaza etsy ambony.
Rehefa manomboka botneta mahomby dia afaka manao heloka bevava toy ny fangalarana ny angona ianao. Ny fampahafantarana manokana toy ny mailaka sy ny tenimiafina dia afaka mandalo amin'ny alalan'ireto fitaovana ireto. Matetika, ny fangalarana karatra amin'ny carte de crédit, ary koa ny fahaverezan'ny tenimiafina dia mitranga amin'ny alalan'ny fanafihana botnet. Ireo mpampiasa izay mitahiry ny angon-drakitra mahatsikaiky toy ny fahazoan-dàlana fidirana, ny vaovao ara-bola ary koa ny aterineto momba ny fandoavam-bola amin'ny aterineto ho fanenjehana an'ireny hackers ireny Source .